Mmetụta dị na mgbanwe, ọ bụghị iru | Martech Zone
Mmetụta bụ maka mgbanwe, ọ bụghị iru
O mere ọzọ. Anọ m n'otu ihe omume ebe onye dị ike maara nke ọma na mmepe egwuregwu mba ụwa na-ekwu. Ọ na-ekwu maka nsogbu ụlọ ọrụ nwere ịdọta ọhụrụ Fans na a kpọmkwem ọduọ ụlọ ọrụ. Okwuru mgbe ahụ okwu ahụ… mmetụta.
Mmetụta - ikike inwe mmetụta na agwa, mmepe, ma ọ bụ omume nke mmadụ ma ọ bụ ihe, ma ọ bụ mmetụta ahụ n'onwe ya.
Ndị otu ya nọ na-enyocha ojiji nke isi algorithms iji chọpụta ndị na-emetụta ọrịa. Ha ga-achọ enyemaka nke ndị na-eme ihe ike a iji gbalịa ịdọta ndị na-ege ntị na ọnụ ọgụgụ mmadụ na ihe omume ahụ. Dị okwu a na-akpali m akụ. Na ndị mmadụ na ụlọ ahịa na-ere ahịa ka kwenyere na aghụghọ ahụ bụ ịkwụ ụfọdụ ndị na-akwụ ụgwọ nnukwu ohere iji kwalite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha na-eme ka m nwee mkpụrụ. Mmetụta bụ maka ikike nwee mmetụta, ọ bụghị naanị iru.
Ọ dịghị nke a na-akpọ enwe mmetụta algorithms N'ebe ahụ na-enye ezi ikike nke mmadụ iji metụta mkpebi ịzụta. Ha niile dabere na ọnụọgụ ndị agbapụ, ndị na-eso ụzọ yana ikike iru ndị folks ozugbo ma ọ bụ site na retweets na mbak. Iru, rute, rute.
Nke a bụ nsogbu mgbe niile na usoro azụmaahịa ọdịnala. Ha nwere oke iru, yabụ n'ezie enwere mmetụta dị egwu. Mana ha agaghị enwe ihe ịga nke ọma n’inweta eziokwu mmetụta ha na mkpa n'ezie. M na-ahụ ngwaahịa na ọrụ kewapụrụ mgbe niile site na-akpọ ndị na-egbu egbu na ụlọ ọrụ anyị… na ọtụtụ oge, ana m ekekọrịta ozi ahụ na netwọkụ m. Ma ọ na-esiri m ike ịzụta ihe na-esite n'aka onye nwere nnukwu mmetụta.
Ọ na-akụda mmụọ n'ihi na ụlọ ọrụ onye ndu a enweela mmetụta karịa ka ha chọrọ - ha nwere nde ndị Fans mba ụwa na-efegharị ma na-ahụ ihe omume ha. Ndị folks a na-emefu ego ma nọrọ ọtụtụ ụbọchị, na-anụ egwu, nri, tupu na asọmpi agbụrụ na gburugburu egwuregwu egwuregwu kachasị ama n'ụwa.
Iji mee ka o doo anya - Anaghị m emegide itinye ihe ndị a na-akpọ ndị na-egbu egbu. Ma jiri ha maka uru ha na-eweta n'ezie… jiri ha buru ozi, ọ bụghị kee ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmetụta ndị mmadụ n'ezie, ịkwesịrị ịkọrọ akụkọ na ndị mmadụ nwere ike itinye aka na mmụọ iji chụọ mkpebi ịzụta. Gosi m akụkọ nke onye ọgbọ m, ego m na-enweta, yana ọdịmma m nwere ahụmịhe na-enweghị atụ na mmemme gị.
Site na nde ndị Fans, enwere nde akụkọ gbara ọkpụrụkpụ n'ofe igwe mmadụ na mmasị niile. Ha abanyebeghị ha! Mee ka ndị na-ege gị ntị nwee ike ịmepụta ma kesaa onyonyo na vidiyo, nye ha ohere ịchọta ma soro ibe ha, nye ngwa mkpanaka maka nchọpụta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Kwe ka ndị na-ege gị ntị mepụta ma kesaa akụkọ ha - wee kesaa ndị kachasị mma site na ọwa ndị a na iru eru. Dakọtara akụkọ ndị na-ege ntị maka nsonaazụ kachasị emetụta.
Tags: mmetụtairuegwuregwu ntụrụndụọdịnala ọdịnala
Ochọpụta Ahịa Marketing ROI maka Dummies
Ndị ahịa bara ọgaranya chọrọ Nlekọta Ndị Nlekọta Ndị Nlekọta